Tag Archive for "अस्पताल भर्ना" - मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल गङ्गालाल अस्पतालमा भर्ना !
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन अस्पताल भर्ना भएका छन् । मंगलबार उनको पुल्चोकस्थित सुमेरु सिटी अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएको छ । आइतबार अपराह्नबाट पेट दुख्ने समस्या आएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिए । सुमेरु सिटी अस्पतालका जनरल सर्जन, युरोलोजिष्ट डा रवीनबाबु बस्नेतको टोलीले उहाँको शल्यक्रिया गरेको उनले बताए । श... थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना, रुघाखोकी बल्झियो !
काठमाडौँ । सामान्य भनिएको रुघाखोकी बल्झिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज भर्ना भएका छन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालका अनुसार केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीको रुघा खोकी सामान्य अवस्थामा नआएपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन । दुई वटै मृगौला फेरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि शनिबार आफ्नै पार्टीको चियापानमा समेत सहभागि भएका थिएनन । स्वास्थ्य जाँचका लागि... थप पढ्नुहोस्